Ukungezwani komzimba ne-House Dust Mite - GAAPP
Ikhaya>Izinhlobo zokwaliwa komzimba>Ukungezwani komzimba ne-House Dust Mite
Ukungezwani komzimba ne-House Dust MiteIpulatifomu Yesiguli Yomhlaba Wonke Nesifo Somoya2021-05-31T11:11:10+02:00
Izikelemu zasendlini zingumthombo okuyo yonke indawo wezifo ezisendlini ezibanga ukungezwani komzimba nomzimba. Izimpawu zokungezwani komzimba nothuli zibandakanya ukuthimula nekhala eligobayo. Abantu abaningi abane-allergies mite allergies nabo babona izimpawu ze ufuba, njengokuphefumula kanzima nokuphefumula kanzima. Izibungu zothuli ziyimbangela evamile ye- isifuba somoya ezinganeni.
Izinhlobo eziyinhloko ezibangela ukuzwela komzimba yi-Dermatophagoides pteronyssinus ne-Dermatophagoides farinae.
Izibungu zothuli kwesinye isikhathi zibizwa ngokuthi izibungu zombhede. Izibungu zothuli, izihlobo eziseduze zemikhaza nezicabucabu, zincane kakhulu ukuthi ungazibona ngaphandle kwesibonakhulu. I-dust mite ilinganisela cishe ikota eyodwa kuya kwengxenye eyodwa kwezintathu zemilimitha. Zincane kakhulu ukuthi ungazibona ngamehlo akho wedwa. Izibungu zothuli zidla amangqamuzana esikhumba achithwa ngabantu, futhi ayachuma ezindaweni ezifudumele nezinomswakama. Avamile ukutholakala ezindaweni ezomile. Emakhaya amaningi, beddi-ing, ifenisha ephakanyisiwe kanye nokhaphethi kunikeza indawo ekahle yezinambuzane zothuli. Izitho zomzimba kanye nokuchitheka kwezibungu zothuli yizinto ezidala ukungezwani nezinto ezithile. Izilokazane eziningi zothuli zifa emazingeni aphansi omswakama noma emazingeni okushisa aphezulu. Kepha bashiya izidumbu zabo nemfucuza ngemuva. Lokhu kungaqhubeka ukudala ukungezwani komzimba. Endlini efudumele, enomswakama, izibungu zothuli zingaphila unyaka wonke.
Izimpawu ze-Allergy ye-House Dust Mite
Impumulo egijimayo Ilume, amehlo abomvu noma amanzi
Ukuluma amakhala noma umphimbo
Enganeni, ukugcoba ikhala njalo phezulu
Uma ukungezwani komzimba kwakho nothuli kunomthelela ekungeneni yisifuba somoya, ungahle uhlangabezane nalokhu:
Umsindo oshayayo lapho ukhipha umoya
Ukuqina kwesifuba noma ubuhlungu
Izinkinga zokulala ezibangelwa ukuphefumula, ukukhwehlela noma ukuphefumula
Ezinye izimpawu zokungezwani komzimba nothuli, njengekhala eligobayo noma ukuthimula, ziyefana nezomkhuhlane ovamile. Imvamisa kuba nzima ukwazi ukuthi ngabe unomkhuhlane noma ukungezwani nezinto ezithile komzimba. Uma izimpawu ziqhubeka isikhathi esingaphezu kwesonto elilodwa, ungahle ube nokungezwani komzimba. Uma izimpawu nezimpawu zakho zinzima - njengokuxinana okukhulu kwamakhala, ubunzima bokulala noma ukuphefumula - bheka udokotela wakho.
Ukuxilongwa Kokungezwani komzimba ne-House Dust Mite
Ukuhlolwa kokungezwani komzimba izokhombisa ukuthi ngabe kukhona ukuzwela okweqile kwizibungu zothuli. Udokotela wakho angasebenzisa ukuhlolwa kwegazi noma ukuhlolwa kwesikhumba ukusiza ekuxilongweni. Umlando wezokwelapha, izimpawu, ukuhlolwa komzimba kanye nemiphumela yokuhlolwa kuzosiza udokotela wakho ukuthola ukuxilongwa okulungile.
Izici ezilandelayo zikhulisa ubungozi bakho bokuthola ukungezwani komzimba nezintuli:
Ukuba nomlando wokungezwani komzimba nomndeni.
Ukuvezwa amazinga aphezulu othuli, ikakhulukazi ekuqaleni kwempilo, kukhulisa ubungozi bakho.
Ukuba ingane noma umuntu omdala osemncane. Kungenzeka ukuthi uhlakulele ukungezwani komzimba ngothuli ebuntwaneni noma ebudaleni.
Ukwelashwa Kwe-House Dust Mite Allergy
Ukugwema kuyindlela engcono kakhulu yokuphatha ukungezwani komzimba ne-dust mite. Kodwa-ke, akunakwenzeka ukuqeda ngokuphelele izibungu zothuli endaweni yakho. Uma unganciphisa ukuvezwa kwakho yizibungu zothuli, kufanele ulindele ukusabela okuncane kokungezwani komzimba noma ukusabela kufanele kube kubi kakhulu, kepha futhi ungadinga nemithi yokulawula izimpawu.
Imishanguzo yokungezwani komzimba nokuthuthukisa izimpawu zokungezwani komzimba namakhala:
Corticosteroids zilethwe njengesifutho samakhala
Ama-decongestants kungasiza ukunciphisa izicubu ezivuvukile emakhaleni akho
I-Leukotriene ama-modifiers avimba isenzo samakhemikhali athile omzimba.
immunotherapy. I-SCIT / Allergy shots (i-subcutaneous specific immunotherapy) noma i-SLIT (sublingual immunotherapy) amaphilisi.
Ukuvimbela Ukungezwani komzimba ne-House Dust Mite
Ukuba nezibungu zothuli akusho ukuthi indlu yakho ayihlanzekile. Awukwazi ukuqeda ngokuphelele izibungu zothuli ekhaya lakho, ungazinciphisa ngokuphawulekayo. Nawa amanye amathiphu wokuthi ungasinciphisa kanjani isibungu sothuli:
Sebenzisa izembozo zombhede ezifakazela ukwaliwa. Ucwaningo lukhombisa ukuthi izibungu eziningi zothuli zihlala ekamelweni lakho lokulala kunanoma iyiphi enye indawo ekhaya lakho. Ngakho-ke lena indawo engcono kakhulu yokuqala. Mboza umatilasi wakho nemicamelo kwizembozo ezingavimbeli uthuli noma i-allergen. Lezi zimbozo zenziwe ngento enezimbotshana ezincane kakhulu ukuvumela izibungu zothuli nomkhiqizo wazo kudlule.
Geza amashidi nezingubo zakho masonto onke. Geza wonke amashidi, izingubo zokulala, okomcamelo namakhava embhedeni emanzini ashisayo okungenani angama-60 ° C noma angu-140 ° F ukubulala izibungu zothuli nokususa izinto ezingezwani nomzimba. Ukuqanda izinto ezingageziseki ngamahora angama-24-48 nakho kungabulala izibungu zothuli, kepha lokhu ngeke kususe ama-allergen.
Thenga amathoyizi agxishiwe. Zigeze kaningi emanzini ashisayo bese usula kahle noma ufake amathoyizi agxishiwe esikhwameni sepulasitiki bese uwaqhwaza amahora angama-24-48, bese uwaxubha kahle. Lokhu futhi kungabulala izibungu zothuli.
Gwema izembozo zokulala ezibamba uthuli kalula futhi kunzima ukuzihlanza kaningi.
Gcina umswakama uphansi. Gcina umswakama ohlobene ngaphansi kwamaphesenti angama-50 ekhaya lakho.
Gwema ukhaphethi wasodongeni nodonga, amakhethini, izimpumputhe, ifenisha ephakanyisiwe nezembozo ezigcwele phansi nemicamelo ekamelweni.
Yiba nomuntu ongenayo i-dust mite yokungezwani komzimba ahlanze igumbi lakho lokulala. Uma lokhu kungenzeki, gqoka imaski yokuhlunga lapho uhlanza noma usula uthuli.
Sebenzisa i-mop noma i-rag enomswakama noma i-ogan kunezinto ezomile ukuhlanza uthuli. Lokhu kuvimbela ukuthi uthuli lungangeni emoyeni.
Hlanza njalo. Izicoci zokuhlanza izihlungi ezikhethekile zeHEPA zingasiza ukugcina izibungu nokungcola kwezimbuzane kungabuyeli emoyeni. Phuma egumbini elicoshiwe cishe amahora amabili ngemuva kokuhlanza. Ukuhlanza ukhaphethi nefenisha ephakanyisiwe kususa uthuli olungaphezulu komhlaba - kepha ukugcoba akususi izibungu eziningi zothuli kanye nezilonda zothuli. Inani elikhulu le-mite labantu lingasala ngoba bahlala ngaphakathi ngaphakathi kokugcwaliswa kosofa, izihlalo, omatilasi, imicamelo kanye nokhaphethi.
Susa i-carpeting nezinye izindawo zokuhlala uthuli. Uma kungenzeka, buyisela ukhaphethi wekamelo lokulala odongeni nodonga ngethayela, ngokhuni, nge-linoleum noma nge-vinyl flooring.
Geza amatagi emanzini ashisayo uma kungenzeka. Amanzi abandayo awasebenzi kahle. Ukuhlanza okomile kubulala zonke izibungu zothuli futhi kuhle nokususa izintuthwane ekuhlaleni ezindwangu.
Uma uneyunithi lesithando somlilo esiphakathi nendawo, sebenzisa isihlungi se-HEPA. Lokhu kungasiza ukubamba izibungu zothuli kusuka kulo lonke ikhaya lakho.